Indlela yokuLahla iincukuthu
NguKacey Kroh, kwiNdlu yeAsshier
Nje ukuba ucokise kuhlolwe iincukuthu kwaye uzimisele ukuba unesifo seencukuthu, kuya kufuneka usisuse kwindalo yakho. Ukungaphumeleli ukwenza oko kuya kubangela ukuqhambuka okunzima ukulawula ngaphandle koncedo lomtshabalalisi. Inkqubo yokususa iincukuthu iyafana nokususa iintwala. Unokuphelisa iincukuthu ngokulandela le miyalelo:
Hlamba onke amalaphu emanzini ashushu.
Amalaphu acocekileyo omphunga kunye nefenitshala engenakuhlanjwa.
Hlanganisa indlu ngokucokisekileyo, uhlawule ngokukodwa kwiindawo ezimnyama.
Faka iioyile ezifanelekileyo kwiindawo ezilukhuni.
Ukuba ulandela ezi zikhokelo uya kususa iincukuthu ngaphandle kwexesha!
Ityala lemifanekiso: UPiotr Naskrecki
Ukuba kunokwenzeka, lahla izinto ezingcolileyo. Kuyacetyiswa ukuba uzilahle ngendlela engakhuthazi ukusetyenziswa kwakhona, ukuthintela abanye ekuthatheni izinto zakho ezilahliweyo kunye nokuqala kwakhona ukuqhambuka.
Hlamba amalaphu angcolileyo eencukuthu
Ukuba uhlangabezana nokuqhambuka kweencukuthu, susa onke amalaphu akho endlwini yakho kwaye uwahlambe. Ukuhlamba impahla eyolukiweyo emanzini angaphezulu kwe-130 ° Fahrenheit kwaye usebenzisa isepha enqabileyo efana nebala, iblitshi ekhuselekileyo ngombala okanye amathontsi ambalwa eoyile efunekayo kunye nesepha oyithandayo yendalo iya kubulala kwaye isuse ezi zidalwa zingathandekiyo.
Ukuba naziphi na iincukuthu ziyenzeka zidlule, faka indawo yokuhlamba impahla kwindawo eyomileyo kwiqondo lobushushu eliphezulu ukugqiba umsebenzi. Phinda inkqubo, ukuba kukho imfuneko.
Musa ukuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde ukhethe Zipakishe izinto ngeplastiki uze uzibeke ecaleni ude ugqibe ukucoca.
Umphunga ucocekile iincukuthu
Ngokucacileyo, awuyi kukwazi ukulinganisa isingqengqelo sakho kumatshini wokuhlamba. Nangona kunjalo, unokuyicoca ngomphunga ukuphelisa uqhambuko. Ukuzisa umphunga ongaphezulu kwe-130 ° Fahrenheit kunye nokufaka umphunga kangangemizuzu emibini ukuya kwemithathu ecaleni kweentanda, imiphetho, kunye nokuhlangana kwayo yonke ifanitshala ephakanyisiweyo kuya kuba ngaphezulu kokulingeneyo.
Qiniseka ukuba ucoca zonke izinto ezinomphunga emva kokuba zomile ukuze uphakamise kwaye ususe naziphi iincukuthu namaqanda.
Soloko ulandela umkhombandlela kwisicoci somsi. Zingabangela ukutsha kwaye, ukuba kusetyenziswa iikhemikhali ezingagunyaziswanga, ngamanye amaxesha zinokuba neziphumo eziyintlekele. Isicoci somsi sinako ukukhupha irhasi enetyhefu, ukuqala umlilo, kunye nokuqhuma okunokubakho, ukuba ukongeza izibulali zinambuzane okanye imichiza engavunyelwanga ukuba isetyenziswe. Lumnka!
Izinto ezincamathelayo zekhaphethi ezingcolileyo
Qiniseka ukuba ucoca indlu yonke, uhlawula ngakumbi kwimiphetho yodonga nodonga. Ukuba unendawo yombhoxo, ungayithumela ukuba icocwe ngobungcali, ukhumbule ukuba ungaphinde uyivelise indawo yombhoxo endlwini de kugqitywe ukucocwa.
Emva kokucoca, fafaza i-silica gel okanye umhlaba we-diatomaceous kuwo wonke umgangatho wendlu yakho. I-Silica kunye ne-diatomaceous earth isebenza njenge-arhente yokomisa ethi, xa sele iqhotyoshelwe, ayinakususwa kwi-bedbug. Oku kubangela ukuba ibug yome kwaye ife.
Izinto ezingenakucocwa ngomphunga okanye ezitshayelweyo zinokutywinwa ngeplastiki kwaye zibekwe elangeni okanye kwisikhenkcezisi. Ukukhanya kwelanga kuya kubulala iincukuthu kwiintsuku ezimbini. Ukuba uthatha isigqibo sokubeka izinto ezitywiniweyo kwisikhenkcezisi, gcina ubuncinci iiveki ezimbini ukuqinisekisa ukuba ibug ifile.
Faka i-oyile efanelekileyo kwiincukuthu ezingcolisekileyo
Eminye indawo kusenokwenzeka ukuba ihlaselwe ziincukuthu, amaqanda, okanye zombini. Iindawo eziqhelekileyo ezinobunzima obuqhelekileyo ezifuna ukunakekelwa zifunyanwa kufutshane nalapho umntu alala khona okanye isilwanyana. Umzekelo, iincukuthu zidla ngokugcwala kwiindawo zokulala ebusuku, iifreyimu zebhedi nezibane.
Iioyile ezibalulekileyo baneempawu zendalo ezigxotha iincukuthu kunye nezinye izifunxi-gazi. Nciphisa iithontsi ezimbalwa zeoyile ebalulekileyo emanzini okanye ngeviniga yeapile cider kwaye ufake isiponji okanye ilaphu lokuhlamba kwilaphu. Nika ingqalelo ekhethekileyo kwimingxuma okanye kwimingxunya, ngakumbi ezo zithintela ukukhanya kwendalo.
Zama ukusebenzisa i-oregano, i-lavender, kunye neeoyile zomthi weti kumphezulu. Ezi oyile zichazwe njengezona zisebenzayo.
Ukuba i-infestation yakho ayipheli cinga ukusebenzisa i-pesticides okanye ukuqesha ingcali yokulawula izinambuzane egxile ekususweni kweencukuthu. Umnqweno omhle!
Ngaba izihloko ze-movie ziya kwiingcaphuno
Yintoni i-ciprofloxacin hcl 500mg